Iphrofayela ye-wholesaleCompany Company - Hangzhou Filter Machinery Equipment Equipment Manufacturer & Supplier
Hangzhou Hlunga Imishini Equipment Co., Ltd.
I-Hangzhou Filter Machinery Equipment Co, Ltd ingumkhiqizi wokucindezela isihlungi, ikhiqiza izinhlobo ezigcwele zemishini yokuhlunga nezinsiza. Ngokukhiqiza nokukhangisa okuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-20 ezimakethe zasekhaya nezaphesheya, uphawu lwethu "JINGWANG" kanye "HZ FILTER" lithole idumela elihle kakhulu kumakhasimende ethu.
Izinhlobo eziyinhloko zokucindezela isihlungi esikunikezayo yizingcwecwe nohlaka lokucindezela isihlungi, igumbi lokucindezela isihlungi elixeqiwe, umshini wokuhlunga ulwelwesi kanye nomshini wokuhlunga wepuleti lensimbi engagqwali. Uhlobo ngalunye lokucindezela isihlungi lungakhethwa ngohlobo lwe-jack yesandla, uhlobo lwepompo ye-pneumatic, uhlobo lwe-hydraulic nohlobo oluzilawulayo ngokuphelele lohlelo
Amapuleti wokuhlunga atholakala ku-plate nohlobo lozimele, uhlobo lwekamelo elihlehlisiwe nohlobo lwe-membrane. Osayizi basuka ku-315x280mm kuye ku-2000x2000mm, okuyibanga eligcwele kakhulu phakathi kwemboni yezindaba zokuhlunga. Izigaba ezisuka kwingcindezi, sikhiqiza ibha engu-6 iye kwayi-12 yebhavu yepuleti elihlehlisiwe lasekamelweni, ngaphandle kwalokho, ingcindezi yokucindezela ibha engu-12 kanye ne-20 yenzelwe amapuleti wokuhlunga ulwelwesi.
Sisebenzele amaklayenti avela ezimbonini ezahlukahlukene, ikakhulukazi eze-semiconductor WWT, i-WWT, ukuhlunga i-iron ore, ukuhlunga ubumba, ukuhlunga udaka obomvu, ukuhlunga amakhemikhali, ukusefa kwe-carrageenan, ukuhlunga uwoyela wesundu, ukuhlunga uwoyela kakhukhunathi, ukuhlunga i-dyestuff, izimboni zokudla, imboni yezemithi kanye ezinye izinhlelo zokusebenza eziqinile zokwehlukanisa amanzi.
Sinezilawuli eziqinile zekhwalithi kuzo zonke izingxenye nezinto esizikhiqizayo noma esizithengile. Umshini ngamunye uzolandela ukuhlolwa nokuhlolwa ngokugcwele ngaphambi kokuphuma kumakhasimende ethu. Futhi yonke imishini izoba newaranti yonyaka owodwa eqinisekiswe yithi. Ungasethemba njengomlingani wesikhathi eside wokubambisana.